मृत्यु भएका व्यक्तिमा ८ दिनपछि कोरोना पुष्टिः शव जलाउन १५० मलामी सहभागी
> मृत्यु भएका व्यक्तिमा ८ दिनपछि कोरोना पुष्टिः शव जलाउन १५० मलामी सहभागी
काठमाडौं, १२ जेठ । वीरगन्जमा रहेको नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएका ७० वर्षीय पुरुषमा मृत्यु भएको ८ दिनपछि कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ती पुरुषको जेठ ४ गते नै मृत्यु भएको थियो ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले पुष्टि गरे ।
‘उहाँको नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको थियो । उहाँमा कोरोना संक्रमण भएको आशंकामा स्वाब संकलन भएकोमा आज पोजेटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएको छ’ उनले भने, ‘उहाँ बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ निवासी भएको खुल्न आएको छ।
‘बाराका ती वृद्धि दमका रोगी हुनुहुन्थ्यो। निमोनिया भएपछि डाक्टरहरुले कोरोनाको शंका गरी स्वाब संकलन गरेर जेठ २ गते हामीलाई बुझाइएको थियो,’ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायले भने, ‘४ गते त्यसको रिपोर्ट आयो। त्यसमा पोजिटिभ आएपछि ५ गते पुनः परीक्षण गर्दा केहि अष्पस्टता भएपछि काठमाडौं पठाइएको थियो।’
सोमबार बिहान त्यसको रिपोर्टमा पनि कोभिड–१९ पोजिटिभ नै देखिएको उनले बताए। उनको शव जलाउनका लागी १५० मानिसहरु मलामीमा सहभागी भएका थिए । उनकाे ८ दिन पछि कोरोना पुष्टी भएपछि त्यहाँ लापरवाही भएकाे भन्दै टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
यो विषय नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक वसरुद्दिन अन्सारीलाई सो रिपोर्टबारे आफूले जानकारी गराएको डा. उपाध्यायले बताए।